Mpanao politika sy mpitondra Miezaka manary dia amin’ny fihetsiketsehana sy tapi-maso
Rivo Rakotovao Mety ho sahirana atsy ho atsy...
Berija, Rolly Mercia, Claudine Razaimamonjy, Mbola Rajaonah sy ny maro hafa, tratry ny haza lambo ireo mpiaradia tamin’ny fitondran’ny Hery vaovao ho an’I Madagasikara (HVM), raha ny fahitan'ny mpanara-baovao azy aloha.
Andry Rajoelina Lasa any Eoropa tokoa nijery an-janany
Niteraka resabe ny fivoahan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, any Eoropa ankehitriny.
Faritra Vakinakatra Hahazo trano iombonana hanodinana ny vatosoa
“Fotodrafitrasa hahafahan` ny Malagasy miantsehatra ao anatin` ny harena an-kibon` ny tany entina hanodinana vatosoa no atsangana aty Vatofotsy izao” hoy
Betroka Voapetraka ara-pomba ofisialy ireo ben` ny tanàna
Notontosaina omaly ny fametraha na ara-pomba ofisialy an` ireo ben` ny tanàna ao amin` ny distrikan`i Betroka.
Fifanandrinana politika Iza no tena mahazo tombotsoa ?
Tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny raharaham-pirenena, ankehitriny.
Plateau Mahafaly Mangataka ho faritra faha-24
Raha an-dalana ny fametrahana ny faritra faha-23 amin` ny fizarana ho faritra roa Vatovavy sy Fitovinany dia mitohy hatrany ny fangatahana sasany amin` ny fametrahana faritra faha-24.
Hanitra Razafimanantsoa “Nalefa an-tsokosoko any Maorisy ny entan’ny Tiko”
Misy tamin’ireo fitaovana tao amin’ny ozinin’ny TOP (Tiko Oil Product) sy ny Margarinerie Toamasina re fa lasa any amin’ny nosy Maorisy, hoy ny Depiote Hanitra Razafimanantsoa omaly nandritra ny fandaharana manokana nandeha tamin’ny haino aman-jery.Fitaoana avy any Allemagne izy ireo,
Ny sasany mampifalifaly vahoaka amin’ny fampiderana fa mahay milalao fonjaby rehefa nandalo tao Mahajanga.
Ny sasany indray mampidera fa midina ifotony hatrany anaty ranomasina mihitsy, hono, hijery fa vitsy dia vitsy sisa ny karazana hazan-drano sasany hitany tao ka dia manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra. Izy manao ilay antso avo ve tsy anisan’ny tompon’andraikitra ? Ny filoham-pirenena moa dia mbola manohy ny fanaony izay efa saika nampiongotra azy tamin’ny toerany ihany miaraka amin’ny fotodrafitrasa fototra tsy mety mampitombo ny any am-bilanim-bahoaka. Mbola mikatso ihany anefa ny fampianarana sy ny fampidiran-ketra. Mitohy ny tsy fandriampahalemana ary faritra nalaza ho nafana tato ho ato toa an’i Malaimbato sy Antsirabe ary Mandoto. Heverina ho zava-doza izany mpampianatra amina CEG no misy maka an-keriny kanefa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny “tompon’andraikitra” akory. Miezaka manary dia amin’ny fihetsiketsehana sy tapi-maso ny mpanao politika sy ny mpitondra satria vao mainka mikatso ny raharaham-pirenena.